Min Altafini ilaa Ronaldo, Baggio & Donnarumma, baro 10-ka laacib ee dhabarka ka toogtey kooxohooda + Sawirro – Gool FM
Min Altafini ilaa Ronaldo, Baggio & Donnarumma, baro 10-ka laacib ee dhabarka ka toogtey kooxohooda + Sawirro
(Roma) 17 Juunyo 2017 – Waxaa dorraad caddaatay in aan la cusboonaysiin doonin qandaraaska qabtaha muluqa ah ee Gianluigi Donnarumma taasoo aad uga yaabisay taageerayaasha & maamulka AC Milan.
Haddaba, aannu idinla wadaagno laacibiintii kooxohooda jid cidla ah uga dhaqaajiyay ama u wareegey kooxo ay aad u coltamaan, waloow aanu midkoodna la mid ahayn Donnarumma.
1 – Roberto Baggio, xagaagii 1990-kii, wuxuu Fiorentina u waydaartey Juventus, waxaa mudaaharaad is qabsaday magaalada Firenze oo idil
2 – Ronaldo wuxuu u wareegay kooxda AC Milan: Kaaga darane kooxdiisii hore ayuu gool ka dhaliyay kulankii Derby Della Madonnina
3 – Ibrahimovic, isagu kooxna u daacad ma aha waayo wuxuu isu maray 8 kooxood, welina wuu socdaa
4 – Lewandowski, Hummels iyo Goetze: Borussia ayay uga bayreen kooxda Bayern Monaco
5 – Figo waxay taageerayaasha Barcelona u bixiyeen ”madax doofaar” kaddib markii uu maalin cad ku biiray kooxda Real Madrid iyagoo tuuryeeyay kuna orriyay markii uu kusoo noqday Camp Nou
6 – Kenny Miller, oo ah qannaas Scottish ah, wuxuu Glasgow Rangers u waydaartey dhanka cagaaran ee magaalada Galscow isagoo aadey Celtic. Wuxuuse 2014 dib ugusoo laabtay Rangers
7 – Carlitos Tevez wuxuu kaliya daacad ka yahay horyaalka Argentina: Boca Juniors marka laga reebo wuxuu 2009 kaddib 2 sano oo uu joogey Man Utd 29 milyan kula biiray dhanka buluug cireedka ah ee magaalada isagoo ka dhacay Man City.
8 – Wuxuu ku barbaaray Spurs, balse 1999-kii wuxuu Sol Campbell, iska diidey inuu qandaraaskiisa cusboonaysiiyo isagoo Tottenham ka doortay Arsenal oo ay ku xafiiltamaan woqooyiga London: Marna lama cafinin.
9 – Higuain iyo Pjanic waxay ku biireen Juventus, iyagoo ka yimid kooxaha ay xafiiltamaan ee AS Rona iyo SSC Napoli: Bahdil
10 – Goolwalaha Rossoneri waa uun ninkii ugu dambeeyay ee ma aha ninkii ugu horreeyay, xusuuso Jose Altafini? Oo ka dhaqaajiyay Napoli si uu ugu biiro Juventus.
AC Milan oo doonaysa inay Bacca kusoo bedelato Klinic
Taageerayaasha oo weli ka jeex jeexaya Donnarumma & wakiilkiisa Raiola + Sawirro